Kukhona ukwahluka ebanzi kakhulu esikhathini sokufika ubudala emazweni ahlukahlukene. Futhi, kwezinye izifundazwe necala lobugebengu, ikhono ukuba ishade futhi ukushada, ukulahla impahla, ukushayela izimoto, ukuthenga utshwala nogwayi futhi iqhaza okhethweni akazange kuhambisane inkathi eza ubudala. Uma kuziwa iningi isiRashiya, futhi kungaba kwezinye izimo ukunciphisa ubuncane beminyaka engena zokuba umuntu omdala?
Ngokwe-Universal Declaration, elawula amalungelo ezingane, ingane umuntu ongaphansi kweminyaka engu-18 ubudala. Futhi iningi eRussia iza kahle ku Declaration - isibopho esiphelele njengoba umthamo kwafezwa ukuqala kweminyaka engu-18. Okungukuthi, ngosuku lokuqala lapho isakhamuzi Russian Federation lishaye 18 uvote ngesibindi, afake isicelo enkantolo, siphethe impahla izivumelwano, bachithe ingcebo nezinto ezifana nalezo. Abantu ngaphansi kweminyaka eyi-18, ethi ulimi bureaucratic, zihlukaniswe intsha (ezineminyaka engaphansi kuka-14 ubudala) futhi izingane (lena engu-14 no-18 iminyaka). Inguquko wengane kusukela esemncane e umsolwa imakwe ngokuthola kwabo passport we isakhamuzi Russian Federation. Akukona amenze onekhono, kodwa namanje amanye intuthuko kule isiqondiso ekuphileni kwakhe lapho.
Uma engamahlongandlebe ziphathwa nguhulumende njengoba izingane zangempela, abancane, futhi kwezinye izimo, kungenzeka anikezwe amalungelo nemisebenzi ozibekile, sengathi ama-Israyeli angena kakade waze waba mdala. ERussia, umnyaka wekuvuma, ngokuvumelana Ikhodi Family, iza elifanayo 18. Nokho, esikhathini Ngaphakathi mo of khulelwa sentombazane encane, lokuzalwa ingane yakhe noma usongo ekuphileni omunye abashadayo ohulumeni bendawo ukuhlangana nokuxazulula enjalo ingane ukushada iminyaka engu-16. Kodwa lokhu akulona umkhawulo: ezinye izikhonzi umfelandawonye bangase babe nesimo imithetho ukunciphisa umkhawulo kumelwe ashade eneminyaka emingaki: izihloko 11 avunyelwe ukushada ngineminyaka engu-14, futhi ekhatsi Bashkortostan, orel nezifunda Novgorod umnyaka wekuvuma akugcini nhlobo. Futhi umshado kwabancane kakade iphenduka ibe izakhamuzi uyakwazi ngokugcwele nesehlukaniso (nakuba senzeka emasontweni ambalwa emva komshado) akuphazamisi bokuhlukaniswa isimo sabo omdala.
zokuba umuntu omdala Early eRussia bungatholakala ngendlela ehlukile - okubizwa ngokuthi "ngokusebenzisa Ukukhululwa." Civil Code (Article 27.) ubeka ukuthi uma imisebenzi ezincane ngaphansi umsebenzi wenkontileka, sivumelwano noma behileleke nakwezamabhizinisi ngenkululeko nabazali, kungaba kuthiwe iziphathimandla sivikelwe omdala ngokugcwele. Kulokhu, ingane ingase ungene ukuthengiselana kanye ukuphendula phambi komthetho ukuba abantu babulawelwe kuzo zabo. By the way, wemfanelo phambi komthetho: okubhekene lobugebengu eRussia bakhangwa 16, kodwa ngenxa amacala abucayi kakhulu (okubulala, ukuphanga, ukweba noma ukudlwengula) - engu-14.
Uma sibheka nebalazwe, embundwini yokuba umuntu omdala kuyadingeka ngezinye izikhathi ukuze yobudala ezahlukene kakhulu. Ipulangwe aphansi - engu-14 ubudala - is baphawula phezu Faroe Islands ezinyathelweni zabo kuyinto Cuba - lapho leso sikhathi iqala eneminyaka engu-16. Ngo iningi amazwe aseYurophu, njengoba nje nathi siwamukele - eminyakeni engu-18. Kodwa iningi eJapane kuphela ufinyelelwe ngezindlela iminyaka engu-20, kuyilapho engu-umshado umakoti kungenziwa sehliselwe engu-14. Futhi has a "uphahla", okungukuthi, esiphezulu nasemkhakheni ubudala, lapho siyeza ubudala e-United States (akuzona zonke izifundazwe), e Guinea, Bahrain, Egypt, Honduras, eCôte d'Ivoire, Cameroon, Monaco, Madagascar kanye Singapore . Ngaphezu kwalokho, kula mazwe, ubakaki phansi engu uma esisodwa singakwazi ukushada ngaphansi kuka yobudala eFrance 15 - umakoti 18 - I-umkhwenyana, e-Italy, ngokulandelana, 14 no-16, futhi ngo-Germany - 16 no-21 ubudala. E-US, kuye ngokuthi isimo, iminyaka 14-15 - kwabesifazane 18-21 - for abafana.
Ukwenqaba avule icala lobugebengu kuqala: kungenzeka inselelo-ke?
Yini ukondla nomdlwana uMalusi German?